Yaa Badalay Boqorkii dalka Sacuudiga ? |
Yaa Badalay Boqorkii dalka Sacuudiga ?
Allaha u naxariistee waxaa magaalada Riyaad ee caasimada dalka Sucuudiga ku geeriyooday boqor Cabdullaahi Bin Cabdulcasiis kaas oo ilaa bishii Septembar ee sanadkii hore ku xanuun sanayay isbitaal ku yaala gudaha dalka Saudi Arabia .
Boqor Cabdullaahi Bin Cabdulcasiis oo xilka saldanada dalka Sucuudiga qabtay sanadkii 2005-kii ayaa waxaa iminka si deg deg ah jagadaas loogu magaacay masuulka lagu magacaabo Amiir Suleymaan bin Abdul Aziiz Aala Sacuuud.
Baroortiiq qaadan doonta mudo dhoor maalmood ah ayaa ka bilaabtay dalka Sucuudiga waxaana lagu wadaa duugta Boqor Cabdullaahi Bin Cabdulcasiis in ay ka soo qeeyb galaan inta ugu badan madaxda Caalamka .